Maalinta: Ogast 9, 2019
IETT si Ay U Abaabusho Ololaha Aagagga Afduubka Dhibanaha
Gaadiidka Dadweynaha oo Bilaash ah Inta lagu jiro Bayram ee Ankara
Dowlada Hoose ee Magaalada Ankara ayaa dhameystirtay dhamaan diyaar garowgii ay la laheyd cutubyadeeda iyo ururadeeda si shacabka caasimada ay ugu ciidaan Ciidul Adxaa nabad iyo xasilooni. Intii lagu jiray 4 maalin kasta Ciidul Adxaa; (11-14 August 2019) gudaha EGO [More ...]
Ku dhaw 40 ee Rize Artvin Airport Mashruuca oo Dhameystiran
Wasiirka Turhan, gudoomiye kuxigeenka AK Party Hayati Yazıcı, gudoomiyaha gobolka Rize Kemal Çeber, xibiga AK Party Osman Aşkın Bak iyo Muhammet Avcı si wada jir ah dhismaha garoonka Rize-Artvin. [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha ee Kahramanmaraş Lacag la'aan
Gaadiidka Eskisehir Lacag la'aan ah
Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir, iyadoo go aanka ay ku raacsan tahay Golaha Dowlada Hoose, iyo sidoo kale Ramadaanka Ciidda Adid-ada iyo basaska degmadu waxay u adeegi doonaan si bilaash ah. Intaa waxaa dheer, booqashada muwaadiniinta ee iidda [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha inta lagu gudajiro Bayram inta lagu guda jiro Bilaashka Bilaashka
Duqa Magaalada Bursa Alinur Aktas, Muwaadiniinta, Ciid al-Adha oo ku sugan jawi nabdoon oo nabad ah si ay ugu noolaadaan magaalada dhammaan tallaabooyinka la qaaday, ayuu yidhi. Duqa magaalada Bursa Alinur Aktaş, Kurban magaalada oo dhan [More ...]
Dowladda Hoose ee Manisa waxay bixisaa gaadiid bilaash ah oo ah basaska korontada ee bartamaha magaalada iyo basaska casaanka ee ku jira MANULAŞ kuwaasoo bixiya adeegyo gobolka oo dhan si aysan muwaadiniintu u helin dhibaatooyin gaadiid inta lagu jiro 4 maalin walba Ciidul Adxaa. [More ...]
Gaadiidka Dadweynaha inta lagu gudajiro Bayram inta lagu gudajiro Kayseri Bilaash
Duqa Degmooyinka Magaalada Kayseri Memduh Büyükkılıç wuxuu ku dhawaaqay in gaadiidka dadweynaha uu noqon doono bilaash inta lagu guda jiro Ciidul Adxaa. Duqa Magaalada Büyükkılıç wuxuu cadeeyay in Muwaadiniinta adeegsada Basaska iyo nidaamka tareenka ay ka faa'iideysan doonaan gaadiidka oo lacag la’aan ah. Dawlada Hoose ee Magaalada [More ...]
Maalinta koowaad ee 2 ee Ciidda ee Gaadiidka Konya ee Bilaashka ah
Dawlada Hoose ee Magaalada Konya, muwaadiniintu waxay qaateen talaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay u qaataan Ciidul Adxaa raaxo leh oo nabad ah. Magaala-weynta, muwaadiniinta, basaska iyo taraamyada inay booqdaan ciidaha si loo hubiyo in dadaallada lagama maarmaanka u ah xasilloonaanta. Intii lagu guda jiray iiddii [More ...]
Akçaray Fasax Fasax Leh
Gaadiidka loo yaqaan 'Akçaray tramPark' waxaa la qaaday tillaabooyin dheeri ah oo loo qaaday Beeraha. Diyaargarowgii hore ee loogu talagalay muwaaddiniinta inay ku noolaadaan ka hortagga xoojinta cabashada suurtagalka ah ee ku saabsan xafladda. Agaasinka Nidaamka Tareenka, oo isagu la kulmay ciida horteeda oo shir qabtay; [More ...]
Dilovası Eynerc Junction (East) wuxuu fududeynayaa iridaha kana soo galey degmada “Mashruuca Dhismaha Iskuxirka Iskuxirka Yavuz Sultan Selim” si dhakhso ah ayuu u socdaa. Yavuz Sultan Selim Street inta ay ku egtahay baaxadda shaqooyinka [More ...]
Xarunta Imtixaanka Nidaamka Tareenka ee Eskişehir iyo Xarunta Cilmi baarista (URAYSİM), oo ku bixin kara adeeg heer qaran iyo heer caalami ah si loo hubiyo joogteynta tayada iyo isku halleynta heerka gawaarida nidaamka tareenka gudaha ee laga soo saaray waddankeenna, Xukuumadda Madaxtooyada. [More ...]